Izinsiza Zomenzeli Obhaliswe Kakhulu
Wonke amazwe anesibopho esisemthethweni sokuthi amabhizinisi abe ne-ejenti ebhalisiwe. Lokhu kuyiqiniso kuziqalo, amabhizinisi amancane, ama-LLC nezinkampani.
Yini i-ejenti ebhalisiwe?
Lezi zinsizakalo zisiza ekuqinisekiseni ukuhambisana okugcwele nezwe lakho ngesikhathi sokuqala nokusebenza kwesikhathi eside sokusebenza kwakho. Ayatholakala ngezikhathi zebhizinisi ukuphatha ukuxhumana nama-ejensi kahulumeni esikhundleni sakho.
Uma ibhizinisi lakho limangalelwa, ikheli lendawo yomenzeli wakho elibhalisiwe lizoba lapho lokhu kwenzeka khona (esikhundleni sehhovisi phambi kwamakhasimende, abasebenzi, njll. .).
Ukwehluleka ukugcina insizakalo yomenzeli obhalisiwe kungalimaza ibhizinisi lakho. Kwezinye izimo, umbuso ungalihlakaza ibhizinisi ngokuvumela amasevisi alo abhalisiwe ukuba aphelelwe yisikhathi.
Inezinye zithi ungasebenza njenge-ejenti yakho ebhalisiwe. Kepha lokho kusho ukuthi kuzofanele uthathe le mithwalo yemfanelo futhi uhlale utholakala ngezikhathi zebhizinisi. Iphinde iveze imininingwane yakho yangasese emphakathini, abantu abaningi abafuna ukuyigwema. Noma ngabe uqala ibhizinisi elisha noma udinga ukushintsha umenzeli wakho obhalisile, lo mhlahlandlela uzokusiza ekutholeni insizakalo ye-ejenti ebhaliswe kangcono yebhizinisi lakho.
Izinsizakalo Zababhalisi Abaphezulu Abayi-6
Umenzeli obhalisiwe eNyakatho Ntshonalanga
- Insizakalo yamakhasimende ehamba phambili
Vakashela eNyakatho Ntshonalanga RA
Kusuka ku- $ 125 Dlulisa Imeyili Yamahhala g
Amafomu Esimo Agcwaliswe Ngaphambili
Nge- "ejenti ebhalisiwe" egameni, akumangazi ukubona
Umenzeli Obhalisiwe OseNyakatho Ntshonalanga uphakathi phezulu kakhulu ohlwini lwethu.
Kusukela ekuqaleni ibhizinisi lakho ligcina ibhizinisi lakho linemihlahlandlela yenkampani, Izinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe zalo mhlinzeki zingezesibili. Kuma-LLC kanye nezinkampani, umenzeli obhalisiwe waseNyakatho-ntshonalanga kuzoba inketho yokuqala okufanele ayicabangele.
Banakho konke ongakufuna noma okudingayo ngensizakalo ye-ejenti ebhalisiwe. Lolu hlelo lufaka phakathi izinzuzo ezifana nalezi:
Amafomu wesimo esigcwaliswe kuqala
Izikhumbuzi zombiko wonyaka
Iskena sombhalo nesitoreji
Ukuzenzela i-inthanethi finyelela
Ukudlulisa imeyili kwamahhala
Ukuskena kwasendaweni kwangosuku
Uzophinda uthole ukwesekwa kwempilo yonke kusuka enkampanini yabaqondisi be-Northwest Registered Agent. Lezi zingcweti zokuthengisa zizokusiza ukuqala nokugcina ibhizinisi lakho ngokuxhaswa okungaphezu kokufinyelela okujwayelekile komenzeli obhalisiwe.
Insizakalo ibiza u- $ 125 ngonyaka. Uma udinga i-ejenti ebhaliswe ezifundazweni ezinhlanu noma ngaphezulu, isilinganiso siyehlela ku- $ 100.
Qalisa nge-Northwest Registered Agent namuhla
# 2 - Incfile - Izinsiza Zomenzeli Obhalise Kakhulu
Umenzeli obhalisiwe wamahhala wonyaka ongu-1
Ukuvuselelwa ngo- $ 119
Ukudluliswa kwemeyili okuzenzakalelayo
Izexwayiso ze-imeyili nezeSMS
Incfile yisevisi yokudala ibhizinisi enokunikezwa okuhlukahlukene. Isetshenziswe ngamabhizinisi angaphezu kwama-500,000 eminyakeni eyi-15 eyedlule. >
Kulungile. Uma usebenzisa i-Incfile ukwakha i-LLC noma inkampani yakho, uzothola i-ejenti yamahhala ebhalisiwe ngonyaka wokuqala.
Banephakeji leSilver lokungena elibiza imali eyi- $ 0 ngokoqobo. Kumele ukhokhe imali ekhokhwa umbuso kuphela. nezinhlelo zePlatinum ziqala ku- $ 149 naku- $ 299, ngokulandelana. Kepha bobathathu beza ne-ejenti ebhaliswe mahhala.
Nakhu ukubuka ezinye zezici namandla wenkonzo ye-ejenti ebhalisiwe ye-Incfile-
Ideshibhodi elula futhi enembile eku-inthanethi
Ukudlulisela phambili nge-imeyili okuzenzakalelayo
Umugqa wedeshibhodi online we-Incfile ugqame ngokusobala kokunye okusezimakethe namuhla. Phakathi kokudluliswa kwemeyili nezexwayiso, le yisevisi ehlukile ngempela.
Intengo ejwayelekile yensizakalo ye-ejenti ebhalisiwe ye-Incfile ingu- $ 119. Uma ubhalisela olunye lwezinhlelo zebhizinisi, uhlelo lwakho luzovuselelwa ngalelo zinga ngemuva konyaka wokuqala wamahhala. izimali zombuso.
Nakekela ukuqala ibhizinisi futhi uthole i-ejenti yamahhala ebhalisiwe
# 3 - Swyft Filings - Agen servicesi-ts
ukuthi okwakuyi- kakhulu ukuvakashelwa kweSyft Filings
Ama-ejenti abhaliswe kusuka ku- $ 149 Simple inion
Ukufinyelela kumadokhumenti aku-inthanethi
Ukugcinwa kwemfihlo nokuhambisana kuqinisekisiwe
I-Swyft Filings elinye igama elaziwayo nelithembekile emhlabeni womenzeli obhalisiwe. Banikezela ngezinsizakalo kuma-LLC, C-Corps, S-Corps, nasezinhlanganweni ezingenzi nzuzo.
Ngakho-ke noma ngabe unjani uhlobo lwebhizinisi, ubukhulu bebhizinisi lakho noma imboni yakho. Umsebenzi, lokhu kuzoba kuhle inketho okufanele uyicabangele. I-Swyft Filings inezinsizakalo ezibhalisiwe ze-ejenti ezitholakala kuzo zonke izifunda ezingama-50.
Ukuqalisa kulula. Mane ugcwalise uhlu lwemibuzo esheshayo online ukubhalisa. Uma usubhalisile, i-Swyft Filings isebenzisa ubuchwepheshe obuzenzakalelayo obukuthumela izikhumbuzo ezifika ngesikhathi ukuqinisekisa ukuthobela.
Insizaiqala ku- $ 149 futhi ivuselele ngokuzenzakalela. Ngakho-ke ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuphelelwa yisikhathi kwensizakalo yakho.
Ukhokha isamba kuphela futhi ngeke ukhathazeke ngezindleko ezifihliwe noma izindleko ezingeziwe.
I-Swyft Filings ikuvumela ukuthi buka kalula amadokhumenti asemthethweni alayishwe ku-inthanethi yi-ejenti yakho ebhalisiwe. Le sevisi ivikelekile, inokwethenjelwa futhi ivikela ubumfihlo bakho.
Kufanele futhi kwaziwe ukuthi iSyft Filings iphinde inikeze ngezinhlelo eziningi zokuqalisa ibhizinisi ongakhetha kuzo. Lawa maphakheji aqala ngo- $ 49 kanye nezimali zombuso. Kodwa-ke, i-ejenti ebhalisiwe ayifakiwe kulezi zinsizakalo.
Qala nge-Swyft Filings namuhla .
# 4 # - ZenBusiness - Best Agent Services ebhaliswe kuma-LLCs
Kusuka ku- $ 99
Kufaka izinhlelo zokuqeqesha
Ukutholakala kwamadokhumenti aku-inthanethi
iZenBusiness kungenye yamagama aziwa kakhulu futhi anedumela emkhakheni wokwakhiwa kwamabhizinisi. Ngenkathi inkampani yaziwa kakhulu ngezinsizakalo zabo zokwakheka kwe-LLC, futhi banikezela ngezinsizakalo ezinhle kakhulu ezibhalisiwe ze-ejenti.
Uma usebenzisa iZenBusiness ukuqala i-LLC yakho, kunengqondo ukuthola i-ejenti ebhalisiwe ngakubo. futhi.
Lezi zinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe zizoqinisekisa ukuthobela umthetho wakho I-LLC. Iphinde ingeze ungqimba lobumfihlo nokuvikelwa ebhizinisini lakho.
I-ZenBusiness izokwamukela yonke imibhalo ebalulekile yezomthetho kuyo yonke into yakho izolayishwa kudeshibhodi eku-inthanethi ehlelekile ukuze uyibuke, uyiphrinte noma uyilande noma kunini.
Izinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe ziqala ku- $ 99 ngonyaka.
Kepha uma usebenzisa iZenBusiness ukuqala kwakhoNjengenkampani, izinsizakalo zabo ze-ejenti ezibhalisiwe zifakiwe kuwo wonke amapulani. Lezi zinhlelo ziqala ku- $ 129, ngakho-ke kunengqondo ukuhlanganisa izinsiza ndawonye. Uma uqala i-LLC futhi udinga i-ejenti ebhalisiwe,
ungabheki ngaphezu kweZenBusiness
# 5 - I-MyCorporation - Ilungele Amabhizinisi Amancane
Iqala ku- $ 120
Idiphozi yamahhala ye-EIN ngokuqeqeshwa
I-RA ifakiwe namaphakeji athile okuqeqesha
sekuneminyaka engaphezu kwengu-20 ikhona. Kusukela ngo-1998, basizile ukudala amabhizinisi angaphezu kwesigidi kuzo zonke izifunda ezingama-50.
Njengephayona nomholi kule mboni, izinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe ze-MyCorporation zilungele amabhizinisi amancane okuqala.
Ukuqalisa kulula. Vele uye kuwebhusayithi bese ugcwalisa ifomu elisheshayo ngo-umugqa. IMyCorporation inikela ngezinsizakalo ezibhalisiwe zama-ejensi kuma-LLC kanye nezinkampani.
Nakhu ozokuthola Ngale nsizakalo:
Yamukela imibhalo esemthethweni neyomthetho engxenyeni yakho
Hlela amadokhumenti akho
Dlulisela amadokhumenti asemthethweni kumnikazi webhizinisi
Thola insizakalo yokucubungula ibhizinisi lakho lapho 'isenzo sezomthetho
umenzeli obhalisiwe izinsizakalo eMyCorporation ziqala ku- $ 120. Izinga livuselelwa ngokuzenzakalela unyaka nonyaka. Ungangeza futhi i-MyIncGuard kuhlelo lwakho, olufaka izikhumbuzo namathuluzi unyaka wonke.
Kulabo kini abaqala ibhizinisi elisha, kunikezwa izinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe. Lokhu kuqala ku- $ 224 naku- $ 324, ngokulandelana. Uma usebenzisa i-MyCorporation ukuqala ibhizinisi lakho, uzothola idiphozi ye-EINmahhala
. # 6 - MyCompanyWorks - Ilungele ukushintsha abenzeli ababhalisiwe
Iqala ku- $ 99
Alukho ushintsho kumali ekhokhelwa abameli
Ukuqeqeshwa kwenkampani kwe-LLC ne-Corps Isiqinisekiso sokwaneliseka esingu-100%
I-MyCompanyWorks kungenye inketho edumile emkhakheni wokwakhiwa kwamabhizinisi. Banikeza ukuqeqeshwa nezinsizakalo ezibhalisiwe zama-ejenti kuma-LLC, c-corps kanye nama-s-Corps. Kusukela ngo-2001, izinkampani ezingaphezu kwama-60,000 ezweni lonke zethembele kuMyCompanyWorks ngezinsizakalo zabo.
I-MyCompanyWorks inikezela ngezinsizakalo zomenzeli obhalisiwe kuzo zonke izifunda ezingama-50. Ngiyayithanda i-MyCompanyWorks ngoba ihlukahluka kakhulu. Izinsizakalo zilungele noma ngubani oqala ibhizinisi elisha kanye nabaninimabhizinisi abafuna ukushintsha i-ejenti yabo ebhalisiwe yebhizinisi labo.i-ise ikhona.
Izinzuzo zezinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe ezivela kulo mhlinzeki zifaka: buyekeza
Izaziso ezisheshayo zokulethwa kwenqubo, amafomu, njll.
Isendlalelo esingeziwe sobumfihlo phakathi kwe-ormation yakho kanye nolwazi lebhizinisi
Insizakalo yomenzeli obhalisiwe iqala ku- $ 99 ngonyaka.
Uma ibhizinisi lakho selivele lisunguliwe futhi ufuna ukushintsha umenzeli wakho obhalisiwe, i-MyCompanyWorks ayifuni. ungakhokhisi imali ethe xaxa ngoshintsho.
Izinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe nazo zifakiwe kuphakheji ephelele yebhizinisi yokuqala, eqala ku- $ 279. Ngenye indlela, ungangeza insizakalo kolunye lwamasu wokuqeqesha, aqala kusuka ku- $ 79. Izinhlelo zeMyCompanyWorks
zisekelwa yisiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90
Ungayithola kanjanir amasevisi we-ejenti abhaliswe kangcono kakhulu kuwe
Ngokuphikisana nenkolelo evamile, akuzona zonke izinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe ezifanayo. Ezinye zalezi zinketho zingcono impela kunezinye. Njengoba kunezinqumo eziningi ongazicabangela, kungaba nzima ukuthola insiza ye-ejenti ebhaliswe kangcono yebhizinisi lakho.
Kunezici ezithile okufanele uzicabangele lapho uhlola izinsizakalo ezahlukahlukene. Ukugcina lokhu okulandelayo engqondweni njengoba uzulazula kuzokwenza impilo yakho ibe lula kakhulu:
Uhlobo lwebhizinisi elihamba
Yiluphi uhlobo lwebhizinisi oqala ngalo? Noma hlobo luni lwenhlangano onayo njengamanje?
Ama-ejenti amaningi abhalisiwe azosebenza nazo zonke izinhlobo zamabhizinisi, kepha amanye alungele ngokucacile kunelinye. Ama-LLC angahle angasebenzisi insizakalo ye-ejenti efanayo ebhalisiwe njenge-S-Corp. Amanye ama-ejenti abhalisiwe angcono ukuthi izinhlangano zisebenzeengenzi nzuzo.
Bamba ujule kancane ukuze ubone ukuthi iziphi izinhlobo zebhizinisi umenzeli obhalisiwe ohlela ukusebenza naye. Uma besebenza nezinkampani ezifana nezakho, lokhu kufanele kube yisixazululo esihle.
Izinsizakalo ezibhaliswe kahle kakhulu zizokusiza ugcine ukuhambisana nemithetho yezwe neyenhlangano.
Funa insizakalo ezokuthumelela i-SMS noma izikhumbuzo ze-imeyili ukuze uqiniseke ukuthi awuphuthelwa yimigomo ebekiwe noma izidingo. Ezinye izinsizakalo zivela kokunye ukwenziwa kanye nemihlahlandlela yokuthobela. Kulula kakhulu ukutshela umehluko phakathi kwensizakalo ye-ejenti ebhalisiwe eyenza ubuncane obungenalutho nalabo abahamba ibanga elingaphezulu.
Ubumfihlo bungobunye bezinzuzo ezinkulu. umenzeli obhalisiwe. Ikheli lomenzeli obhalisiwe lizofakwa kuhlu njengerekhodi lomphakathi, hhayi ikheli lakho lasekhaya noma lehhovisi.
ImibhaloIzincwadi zezomthetho nezikahulumeni zingenziwa lula nge-ejenti yakho ebhalisiwe. Abanye bazohlinzeka ngokudluliselwa kweposi ngokungafani nokugcinwa kweposi nje. Abanye bazolayisha ngokuphepha imibhalo kudeshibhodi eku-inthanethi ongayifinyelela kude.
Izinsizakalo Zokuthuthukiswa Kwebhizinisi
Iningi labantu abafuna insizakalo ye-ejenti ebhalisiwe baqala ibhizinisi elisha. Kunengqondo ukusebenzisa inkampani eyodwa kuphela kuzo zombili izinsizakalo. Abanye bazonikela ngonyaka wamahhala wezinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe lapho ubhalisela uhlelo lokuqalisa.
Uma usuvele unebhizinisi esivele likhona futhi udinga nje ukushintsha umenzeli wakho obhalisiwe, izinsizakalo zebhizinisi zokuqala ungabi obaluleke kangakoI-ortant yakho.
Intengo yamasevisi we-ejenti ebhalisiwe yehla cishe ngo- $ 100 ngonyaka. Ungathola amanye ngo- $ 50 ngaphezulu noma ngaphansi. Kepha uma ukhuluma nje, akufanele ukhokhe imali ethe xaxa.
Ezinye izinkampani zisebenzisa ummeli wazo njenge-ejenti ebhalisiwe. Kepha kuzobiza okuningi kakhulu uma kuqhathaniswa nezinsizakalo ezibuyekezwe kulo mhlahlandlela. isilinganiso sokusebenza.
Umenzeli wakho obhalisiwe kufanele abe lapho ukukusiza uma unemibuzo noma udinga usizo.
Noma ngabe ngocingo, mathupha, noma nge-portal online, lokhu kuyisici esibalulekile futhi esivame ukunganakwa se-ejenti yokuhlola insizakalo ebhalisiwe. Ngincoma ukuthi ufunde ukubuyekezwa kwamakhasimende ngaphambi kokwenza isinqumo sokugcina. Ababuyekezi abaningi bayashouzoba nokuthile akwenze ngosizo (noma luhle noma lubi). Lawa mazwi angakusiza ukukuhambisa ngandlela thile uma uphakathi kokunye ongakhetha kukho.
Iyiphi insiza yomenzeli ebhaliswe kahle kunazo zonke? Kuya ngalokho okufunayo.
Ummeli obhalisiwe osenyakatho ntshonalanga ukukhetha kwethu okuphezulu kokuhlinzekwa kwamakhasimende njengoba ehamba ngaphezulu nangaphezulu ukuhlangabezana nezidingo zakho. I-Incfile inikezela ngezinsizakalo zama-ejenti ezibhalisiwe zamahhala lapho ubhalisela iphakethe lokuqala ibhizinisi. I-Swyft Filings ihlela ukwamukela zonke izinhlobo zebhizinisi.
Uma wenza i-LLC, hlola izinsizakalo ze-ejenti ezibhalisiwe ezinikezwa yiZenBusiness. Amabhizinisi amancane kufanele aphendukele ezinsizakalweni zeMyCorporation. Kulabo abafuna ukushintsha ama-ejenti abhalisiwe, i-MyCompanyWorks ayikhokhisi imali yomenzeli wokushintsha.
Akunandaba nohlobo lwebhizinisi lakho noma bUma kunjalo, ungakuthola insiza yomenzeli ebhaliswe kakhulu ngokulandela izincomo ezikulo mhlahlandlela.
Umhlahlandlela Wabaqalayo Wokukhokha Izikhathi
2021-06-21 00:04:32 | Iwebhusayithi
Unquma kanjani ukuthi isikhathi sokukhokha masonto onke, kabili-ngeviki, noma amasonto amabili, noma ukuhlanganiswa kwalokhu okuthathu kungaba yisikhathi sokukhokhelwa esifanele kakhulu sebhizinisi lakho? Izici ezinjengokuthandwa ngabasebenzi nemithetho yezabasebenzi ziyizinto ezisobala. Kepha futhi...
Umhlahlandlela wabaqalayo wezisebenzi ezikude
2021-06-21 00:02:10 | Iwebhusayithi
Ngenkathi ukusebenza kude kwakukade kuyivelakancane kwamabhizinisi, lokhu kushintshe kakhulu emlandweni wakamuva. Ucwaningo olwenziwe ngusomnotho waseStanford uNicholas Bloom lukhombisa ukuthi kusukela ngoJuni 2020, ama-42% wabasebenzi e-United States babesebenza ekhaya ngokugcwele. Ngenkathi lezo z...
Yakha ikhasi lokufika elilungiselelwe usebenzisa izinto ezibangela ingqondo
2021-06-20 08:35:44 | Iwebhusayithi
Inhloso yekhasi lokufika ukuthola izivakashi ukuthi zithathe isenzo, noma ngabe ukuthenga umkhiqizo, ukujoyina uhlu lwe-imeyili, ukuqala isilingo samahhala, noma okunye. "ukuthi kuzotholakala. Udinga isu eliqondisa izivakashi ekwenzeni isenzo osifunayo. Enye indlela yokwenza izivakashi zithathe isin...
Ungayisetha kanjani imihlomulo yabasebenzi
2021-06-19 20:20:25 | Iwebhusayithi
Noma ngabe ubukhulu bebhizinisi bunjani, enye yezindlela ezingcono kakhulu zokugcina abasebenzi bejabule, bethembekile futhi bekhiqiza inezinzuzo ezinkulu. Izinzuzo zabo, noma uma amarekhodi enzuzo enganembi, kuyabakhathaza bobabili labo bantu. Ukuba nenqubo yokusetha ecacile yohlelo lwakho lwezinzu...
Umhlahlandlela Wabaqalayo Wezinhlelo Zebhonasi Zabasebenzi
2021-06-19 20:14:32 | Iwebhusayithi
Izinhlelo zebhonasi zabasebenzi ziyindlela enhle yokukhuthaza abasebenzi bakho ukuthi bathuthukise noma bagcine ukusebenza kwabo emsebenzini ukuze bakwazi ukufeza izinhloso zebhizinisi ezintsha. amathuba alinganayo abo bonke abasebenzi nokuqonda ukuthi yini ekhuthaza umuntu ngamunye ngokweqiniso. Fu...